Friday July 26, 2019 - 16:23:31 in Wararka by Mogadishu Times
1-Nin Sheikh ah oo Dad wacdinayay ayaa yiri: Xallaalu ma dhunto. Hadda ka hor ayaa 3 Tuug waxa ey Nin Safar ah ka xadeen Dameer Dahab ugu rarnaa. Labo ka mid ah ayaa kii kale u heshiiyay, Dagaal dheer kadib waa dileen. Labadii soo hartay mid ayaa kii
1-Nin Sheikh ah oo Dad wacdinayay ayaa yiri: Xallaalu ma dhunto. Hadda ka hor ayaa 3 Tuug waxa ey Nin Safar ah ka xadeen Dameer Dahab ugu rarnaa. Labo ka mid ah ayaa kii kale u heshiiyay, Dagaal dheer kadib waa dileen. Labadii soo hartay mid ayaa kii kale 4 jeer Caloosha Middi uga muday, waana dilay, isagiina Buur dheer ayaa ka soo dhacay. Dameerkii oo kaligii ah ayaa dib isaga soo noqday. Waxa uuna ka horyimid Ninkii lahaa oo baadi goobayo. Dadkii waa u khusuuceen sheekadii sheekha ee Xallaalu ,ma dhunto. Wiil yar oo Jamaaceeda la joogay ayaa yiri: Sheekhoow haddii 3dii Tuug wada dhinteen, in sheekadu sidaan u dhacday, yaa soo wariyay ma Dameerkii? Shiikhii mar hore ayuu Hurday, yaa u jawaabayo. ( F.S: 1aad)